Ngwa site na okirikiri
Lee ka ọ ga-esi magbuo onwe ya iji jikọta ọnụ ọgụgụ dịgasị iche iche nke akwụkwọ! Ndị nne na nna kwesịrị icheta na ọhụụ dị iche iche na-adọrọ mmasị ma dịgasị iche iche na-adọrọ mmasị ma dịgasị iche iche ọ bụghị nanị na ịdọrọ obere sculptor ruo ogologo oge, kamakwa ịzụlite echiche echiche ya n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị obere iji belata ụdị ọdịdị geometric dị mgbagwoju anya, rịọ ya ka o mepụta ngwa site na okirikiri, semicircles, akụkụ nke gburugburu na ovals, nke a ga-akwadebe tupu oge eruo. Na mgbakwunye na gluu na mpempe akwụkwọ, nke ga-abụ ihe ndabere nke ọrụ ahụ, ọ dịghị ihe ga-adị mkpa.
Ụdị njirimara na-adọrọ mmasị ga-apụta ma ọ bụrụ na epepụrịrị isii nke otu radius ahụ site na akwụkwọ aja aja. Abụọ n'ime ha na-ebipụ ọkara - ọ ga-abụ aka na ụkwụ Cheburashka. Gịkọta nkọwa ma see ihu anụmanụ ahụ. A na-ebipụ imi na anya.
Iji mee nkịta ọhịa obi ụtọ, ị ga-achọ ọnụọgụ atọ nke otu nhata na ọkara nke gburugburu nke dịkwuo ibu, nke ga-arụ ọrụ dịka ahụ. A na-ebibi okirikiri abụọ n'ime oghere. Nke a ga-abụ ọdụ na nkwonkwo, nke fọdụrụ na-egbutu ọkara iji mee ka ntị gwụ.
Akara anọ, ọkara abụọ na otu nnukwu gburugburu anyị ga-achọ ịme nwa ehi mara mma. Nke kachasị ukwuu - ahụ, obere obere na otu obere, belata na ọkara ụkwụ, obere obere - ogwe (na-ebipụkwa ọkara). Ogwe abụọ nke ọkara akara - nke a bụ isi na ntị.
Iji mee ka ngwa ngwa na akuku aquarium dị mkpa iji kwadebe ọ bụghị naanị dịgasị iche iche, kamakwa akwụkwọ dị iche iche. E nweghị ebe ị ga-eche n'echiche! Azụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla: acha uhie uhie na nnukwu, multicolored na monochrome, na a bifurcated ma ọ bụ ọdụ na ntù.
N'otu ụzọ ahụ, Sowenok, na Ladybug, na Parrot, na Ostrich, na Ntuba, na Krabik.
Site na agba gburugburu nke gburugburu ị nwere ike ịme osisi fleur-semicolour. Ihe dị otú ahụ eji okooko osisi mee ihe site na okirikiri, ma ọ bụ karịa nkwụsị ha, dị mfe, mana ọ mara mma nke ukwuu. Mgbe ị na-eme ihe na akwụkwọ doro anya, ị nwere ike iwepụta akwụkwọ akwụkwọ velvet mara mma dị ka ihe maka ọrụ. Ngwa dị otú a, a ga-enye ya, ga-abụ onyinye mbụ magburu onwe ya nye nne nne.
Na-akwadebe maka nwa okirikiri, semicircles, akụkụ nke okirikiri nke akwụkwọ nke dị iche iche agba na textures, ị ga-enye ya na-akpali mmasị oge. Na ịchọta ụdị ngwa ndị a nyere, ị nwere ike ịgafe ọrụ ndị siri ike na ịmepụta ngwa sitere na ọnụ ọgụgụ ndị a na-ede aha .
Isiokwu afọ ọhụrụ site na akwụkwọ akụkọ
Ihe eji egwuri egwu ụmụaka maka ụmụaka 4-5 afọ
Eke site na ugu na isiokwu "Mgbụsị akwụkwọ"
Ihu - nsogbu
Ịzụlite ikike okike nke ụmụ akwụkwọ
Nwa ahụ anaghị eri nri - ihe ị ga-eme?
Nwatakịrị ahụ ekpuchi isi ya
Ihe si n'aka osisi na croup na aka aka ha
Kedu ka esi eme bea nke plastine?
Kedu ihe nwatakịrị chọrọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara?
Kedu otu esi esi duru oke umu?
Ọkụ ụmụaka maka ụmụaka
Ntak emi ada odo epupụta?
Akpụkpọ ụkwụ massage maka ọnwụ
Thrombocytopenia - ọgwụgwọ
Chọọchị St. Philip Neri
Mascotte akpụkpọ ụkwụ
Kedu ihe ị ga-enye maka ụbọchị nne m?
Barbed Kurdyuk - ezi na ihe ọjọọ
Lipoic acid maka ụkọ ọnwụ
Pọọpọ akpa na-ebugharị tupu ịbịa
Esi ewepu Mukaltin maka ụmụaka?
Gịnị mere azụ ji anwụ n'ime aquarium?
Achịcha anụ - uru na nkwekọrịta
Foto na ọdịdị n'oge oyi
Kedu ihe bụ ikpe ziri ezi na otu esi enweta ikpe ziri ezi?
Ụmụaka maka ụmụ agbọghọ
Akara Aquarium - isi nuances nhọrọ na ọdịnaya
Ogige mgbidi plastics maka mma ime
Ọkpụkpụ herpetic stomatitis na ụmụaka
Mgbu n'ubu aka ekpe
Trieste - ebe nkiri
Myocarditis - mgbaàmà